Somaliland oo War kasoo saartay doorashooyinka & arrimaha….. - Awdinle Online
Fadhigii 71aad ee golaha wasiirrada Somaliland oo uu shir guddoominayey Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, kuna wehelinaayey Madaxweyne ku xigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo maanta qabsoomay, ayaa lagaga dooday qodobbo muhiima ah oo ay ka mid ahaayeen, arrimaha doorashooyinka, abaaraha iyo arrimo kale.
Ugu horrayn golaha wasiirradu waxay fadhigii maanta ku lafo-gureen in la xoojiyo amniga waqtiga doorashada is-barkan ee wakiillada iyo deegaanka ee Somaliland ka qorshaysan 31-05-2021-ka.
Waxa kale oo goluhu isla qaatay sida inshuruucda doorashooyinku dhigayo warbaahinta dawladda oo ah hanti qaran, ay dhex u noqoto xisbiyada qaranka, lana sii dardargeliyo wada-shaqayntii hore uga dhaxaysay xisbiyada qaranka iyo warbaahinta Xukuumaddu maamusho.
Previous articleMaxaa kajira in uu baaqday shirka RW Rooble & Midowga Musharixiinta?
Next articleBanaanbaxayaasha Musharixiinta oo Shan Isgoys ka bilaaban doono